မြန်မာပြည်လုပ်ငန်းရှင်ဘ၀မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတကြီးသို့ ((Herbert Clark Hoover)) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » မြန်မာပြည်လုပ်ငန်းရှင်ဘ၀မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတကြီးသို့ ((Herbert Clark Hoover))
Posted by kai on Apr 17, 2010 in Education, History | 10 comments
မြန်မာပြည်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်လည်း သမ္မတကြီးဖြစ်လာသူမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏၃၁ယောက်မြောက်သမ္မတကြီးHerbert Hooverဖြစ်ပါသည်။
သမ္မတကြီးHerbert Hooverအား သြဂုတ်လ၁၀ရက်၊၁၈၇၄ခုနှစ်တွင်Iowa Stateတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။အစ်ကိုကြီး၁ယောက်နှင့်ညီမငယ်၁ယောက်ရှိသည်။ငယ်စဉ်ကပင် မိဘများကွယ်လွန်သွားသောကြောင့် ဆွေမျိုးများနှင့်ကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
San Franciscoမြို့တောင်ဖက်မိုင်၃၀ခန့်အကွာရှိ Stanford Universityစတင်ဖွင့်လှစ်စဉ် ပထမဆုံးသောကျောင်းသားအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ဘူမိဗေဒနှင့်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ ကို ၁၈၉၅ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။သူနှင့် Standford Universityကျောင်းနေဖက် Lau Menryနှင့် ၁၈၉၉တွင်လက်ထပ်ခဲ့သည်။သြစတြေးလျ၊တရုတ်စသော နိုင်ငံအသီးသီးတွင်တာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ထိုသို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း တရုတ်ရာဇ၀င်တွင်ဖော်ပြထားသော ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံနမ္မတူမြို့အနီးရှိဘော်တွင်း(ငွေတွင်း)အကြောင်းကို သိရှိလာခဲ့သည်ဆိုပါသည်။
အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်ချုပ်ထားသောထိုစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံ၊ရန်ကုန်မှတဆင့်၊မန္တလေးသို့လည်းကောင်း၊မန္တလေးမှမိုင်၁၅၀ခန့်ဝေးသောနမတူမြို့သို့လည်းကောင်း မြင်းများဖြင့်သွားရောက်ခဲ့သည်။
ဘော်တွင်းသို့ရောက်သောအခါ ဟိုးယခင်တရုတ်တို့စွန့်ပစ်ထားခဲ့သော ဘော်တွင်းဟောင်းများကိုမြင်ခဲ့ရသည်ဆိုသည်။
တရုတ်တို့သည် အဆိုပါဘော်တွင်းများအားစွန့်ပစ်သွားရခြင်းအကြောင်းမှာ ဒေသတွင်းပန်းသေးတရုတ်တို့ဆူပူပုန်ကန်ခြင်း၊ထိုစဉ်ကတရုတ်တို့၏သတ္ထုတူးဖော်ရေးနှင့်သန့်စင်မှုနည်းပညာ
ချို့တဲ့မှုကြောင့် စီးပွားရေးတွက်ချေမကိုက်ဖြစ်လာခြင်းတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။သို့ရာတွင် Stanford UniversityမှFirst Batchဖြင့်ကျောင်းဆင်းလာသောHerbert Hooverအတွက်မှာကား စီးပွား
သူပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရသောပြသနာမှာ သတ္ထုတွင်းဟောင်းများထဲတွင်သားပေါက်နေသောကျားမိသားစုများကိုရှင်းလင်းရေးဖြစ်သည်။သူသည် သတ္ထုတွင်းဟောင်းအဦးသစ်ပင်ပေါ်တွင်
လင့်စင်ထိုးပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်စောင့်နေခဲ့ရသည်။တနေ့ကျားထွက်လာသောအခါ ရိုင်ဖယ်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး သတ္ထုတွင်းဟောင်းများအား ခေတ်မီစနစ်တ
ကျလုပ်ဆောင်ပြုပြင်ခဲ့ရာ ထိုစဉ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘော်မိုင်း(ငွေသတ္ထုတွင်းကြိး)ဖြစ်လာခဲ့သည်။Hooverသည်လည်း သန်းကြွယ်သဌေးကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။မြန်မာပြည်မှာတင်မဟုတ် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းကျော်ကြားသူတဦးဖြစ်လာသည်။
နေစကြ၀ဠာထဲရှိ ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှား(Astroid)တခုအားလည်းသမ္မတကြီးကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Hoover၏အမည်ကိုပေးခဲ့သည်။
သမ္မတကြီးHooverသည် စီးပွားရေးအခက်အခဲမှလွတ်မြောက်စေရန်နှင့် အစားအသောက်မပြတ်လတ်စေရန်အစားအစာများအား သိုမှီးထိန်းချုပ်ဖြန့်ချိပေးသည်။နောင်အခါ
တွင် အစားအသောက်များအားထိန်းချုပ်သိုမှီးသည်ဟူသောစကားကို Hooveriseလုပ်သည်ဟု ဗန်းစကားအဖြစ်ပြောလာကြသည်။
သမတကြီးHooverသည် တက္ကသိုလ်များစွာမှ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ပေါင်း၇၅ခုကို ရရှိခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ၂၀၊၁၉၆၄တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂေဇက် မတ်လ ၂၀၁၀ ထုတ်တွင်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ အလည်လာသူမြန်မာများ လတ်စ်ဗေးဂတ်စ်မြို့ အနီးရှိ (ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုရေပေးလျှပ်စစ်ဝေနေသော) ဟူးဗားရေကာတာကြီးကို သိကြ၊ သွားလည်ကြဖူးပါလိမ့်မည်။
ထိုမျှနာမယ်ကြီးလှသော ရေကာတာ၏အမည်နှင့် မြန်မာပြည်ထူးခြားစွာ ဆက်စပ်မှုရှိနေသည်ကို ပြောပြနိုင်ကြပါစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မှန်းမသိ..မြန်မာပြည်နမ္မတူဘော်တွင်းအကြောင်းရေးထားသော မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းနှင့် ၀ိကီတွင်ပြထားသော သမ္မတကြီးအကြောင်းတွင် ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
ပိုမိုအသေးစိတ်သိလိုသူများ အောက်ပါပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ယူ ဖတ်သင့်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်လည်း သမ္မတကြီးဖြစ်လာသူမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်
သမ္မတကြီးHerbert Hooverအား သြဂုတ်လ၁၀ရက်၊၁၈၇၄ခုနှစ်တွင်Iowa Stateတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။အစ်ကိုကြီး၁
စဉ်ကပင် မိဘများကွယ်လွန်သွားသောကြောင့် ဆွေမျိုးများနှင့်ကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
San Franciscoမြို့တောင်ဖက်မိုင်၃၀ခန့်အကွာရှိ Stanford Universityစတင်ဖွင့်လှစ်စဉ် ပထမဆုံးသောကျောင်းသားအဖြစ် တက်
ရောက်ခဲ့သည်။ဘူမိဗေဒနှင့်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ ကို ၁၈၉၅ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။သူနှင့် Standford Universityကျောင်းနေဖက် Lau Menryနှင့်
ရင်း တရုတ်ရာဇ၀င်တွင်ဖော်ပြထားသော ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံနမ္မတူမြို့အနီးရှိဘော်တွင်း(ငွေတွင်း)အကြောင်းကို သိရှိလာခဲ့သည်ဆိုပါသည်။
ချို့တဲ့မှုကြောင့် စီးပွားရေးတွက်ချေမကိုက်ဖြစ်လာခြင်းတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။သို့ရာတွင် Stanford UniversityမှFirst Batchဖြင့်ကျောင်းဆင်းလာ
သောHerbert Hooverအတွက်မှာကား စီးပွား
အောင်စောင့်နေခဲ့ရသည်။တနေ့ကျားထွက်လာသောအခါ ရိုင်ဖယ်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး သတ္ထုတွင်းဟောင်းများအား ခေတ်မီစနစ်တ
တွေ့ခဲ့ရပြီး Satand Ford Universityမှသင်ယူခဲ့သောပညာ၊မြန်မာပြည်တွင်ရှာဖွေခဲ့သော ဥစ္စာဓန နှင့် လုပ်ငန်းအသီးသီးမှရခဲ့သောအတွေ့အကြုံတို့ကို အခြေခံပြီးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲခြေစုံပစ်
၀င်ခဲ့ရာ ၁၉၂၈တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၃၁ယောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရန် Hooverသည် stimulateစီမံကိန်းများစွာ
ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ Arizona Stateနှင့်Nevada Stateအစပ်ရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံရေကာတာကြီးလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။အဆိုပါရေကာတာကြီးကို သမ္မတကြီးHooverအားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
သည်ဟူသောစကားကို Hooveriseလုပ်သည်ဟု ဗန်းစကားအဖြစ်ပြောလာကြသည်။
Hoover အကြောင်းအရင်က သေချာမသိခဲ့ပါ
တိမ်ုမြုပ်နေတဲ့ သမိုင်းကြောင်း တစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ရလို အံသြ၀မ်းသာမိပါတယ်..။ ကိုယ်နိုင်ငံကနေ ဖြစ်သွားခဲ့လို့ တဖန်စိတ်လဲ နာရပါတယ်.. ကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သယံဇာတ ကို ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေ မသုံးစွဲနိုင်ကြရလိုပါ..။
thanksalot..,kai.,
this is twice..
ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ ကြုံတုန်း ကြွားရဦးမယ်။ သမ္မတကြီး Herbert Hoover က သနားစဖွယ် သားလူမမယ် http://myanmargazette.net/49054/creative-writing ထဲက ဦးခင်နဲ့ ဘဝချင်း တူနေတယ်နော်။
အော် လတ်စသတ်တော့မြန်မာမှာအောင်မြေလာ နင်းသွားတာကိုး ။ ကျေးဇူပါ သဂျီး ။ သဂျီး ကျတော့ စတ်ိတ်ကအောင်မြေပေါ့
သူက ၅၄ နှစ်မှာ သမတဖြစ်တာနော်။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက ဘော်တွင်းအလုပ်ကို ဆက်မလုပ်တော့တဲ့ပုံဘဲ။ မီလျံနာဖြစ်တဲ့အထိ ၀င်ငွေကောင်းခဲ့တဲ့ အလုပ်ကို ဘာကြောင့် ဘယ်လို ထားခဲ့တာလဲ သိချင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် လာခြေချ သွားတာ ဆိုတော့ သဂျီးကော နောက်လာမဲ့ သမ္မတ ရွေးပဲ ဘယ်လိုလဲ ရွာထဲမှာ သတင်းတွေ ကြားနေတယ်နော်။
Herbert Hoover, who entered the Oval Office in 1929, visited Myanmar in 1905, during his pre-political years asasuccessful mining engineer.
In The Memoirs of Herbert Hoover: Years of Adventure 1874-1920, Mr Hoover tells of how he became aware of mining prospects in Myanmar throughachance encounter with Mr A. C. Martin,arailway contractor in Burma, duringatrip between Malaysia and Sri Lanka.
While making his way north to Mandalay before visiting Hsipaw in Shan State, Mr Hoover was enraptured by the people he encountered along the way.
“I stoleaday off at Rangoon to visit the Shwedaung [sic] Pagoda, and later on,aday or two at Mandalay to absorb the atmosphere of the only truly happy and cheerful race in all Asia—the Burmese,” said Mr Hoover.
Mr Hoover’s itinerary included crawling through abandoned mine shafts by candlelight where he hadaclose brush withaBengali tiger. The moment had the makings of an H. Rider Haggard tale and Mr Obama’s planned speech at Yangon University is certainlyaless treacherous scheduling choice.
Mr Hoover returned to Myanmar in 1907, spending three months here with his wife, two young sons and sister-in-law. At the outbreak of the First World War, Hoover sold his interest in the Burma Mine Company.
Forty-five years passed before another would-be US president visited Myanmar. Richard Nixon, vice president under Dwight D. Eisenhower, rang the bells at Shwedagon Pagoda in 1953.
The most memorable moment of Mr Nixon’s visit came when he encountered anti-American protestors in Pegu, now Bago, 80 kilometres northeast of Yangon.
The incident, recalled by Mr Nixon in RN: The Memoirs of Richard Nixon, cited this asaformative moment in his approach to addressing the issue of Communism.
Against the advice of his security detail he waded intoacrowd of protestors holding signs “Go back Warmonger.” Anti-American sentiment was running high in Asia at the end of the Korea War. When Mr Nixon found who he thought to be the leader of the protest, he introduced himself, then asked why the man was so upset.
According to an article from the United Press in 1953, “Vice President Richard M. Nixon took the wind out of the Burmese Communist sails today by marching smilingly into the middle of an anti-American demonstration and shaking hands all around.”
“The experience bolstered my instinctive belief that the only way to deal with Communists is to stand up to them. Otherwise they will exploit your politeness as weakness. They will try to make you afraid and then take advantage of your fears. Fear is the primary weapon of Communists,” Mr Nixon wrote.
Mr Nixon returned to Myanmar in 1985: it was 11 years after the Watergate scandal prematurely ended his second term as president. The visit was hardly covered by the press, as the country began to close itself off from journalists.
A short article by the Associated Press noted that Mr Nixon’s second trip was in keeping with Myanmar superstition that he would return.
“Local belief has it that visitors who ring the bell [at Shwedagon Pagoda] will return to Burma,” the article stated.
Mr Nixon met with General Ne Win, the chief architect of the “Burmese Path to Socialism,” which was largely responsible for plunging the country from prosperity into poverty.
The legacy of General Ne Win’s rule continues to the present day. However with considerable momentum moving forward in the reforms process, President Obama will be meetingaleader who has shown adesire to enact lasting change.
Thank you for sharing. I’d never known this.
နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း (၁၉၁၄-ခုနှစ်မှ ၁၈၆၈-ခုနှစ်)
ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်း၌ သတ္တုတူးဖေါ်ခြင်းကို ၁၄၁၂-ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်လူမျိုးများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်တို့သည် ထိုခေတ်က ခဲသတ္တုရိုင်းများထဲမှ ငွေစင်ကိုသာ အဓိကထားထုတ်ယူ ကြိုချက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဘော်တွင်းဒေသ၏ သစ်တောများပြုန်းတီးကုန်ပြီး ယခုအခါ တောင်ကတုန်းများအဖြစ်သာ ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ ငွေစင်ကိုသာ ကြိုချက်ယူသွားသဖြင့် ဘော်တွင်းဒေသ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးတဝိုက်တွင် ယခုအချိန်အထိ ခဲချော်ချေး (Slag) ပုံများကိုတွေ့ရှိရလေသည်။ မက္ကလာရင်၊ ကော်ဂျင်းဘရောင်းစသော ဘူမိပညာရှင်များ၏ မှတ်းတမ်းအရ ရှေးတရုတ်တို့သည် ၁၈၆၈-ခုနှစ်တွင် ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်းမှ အပြီးအပိုင် စွန့်ခွာသွားကြသည်ဟုဆိုပါသည်။
နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း (၁၈၆၈-ခုနှစ်မှ ၁၉၀၆-ခုနှစ်)
တရုတ်တိုထွက်ခွာသွားသောအခါတွင် ဘော်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်၌ နေထိုင်လဆက်ရှိသော ကချင်လူမျိုးများ ဘော်တွင်း၏ တောင်ဘက်ယွန်းယွန်းမဝေးလှသော နမ့်ဆန်ဒေသမှ ပလောင်တိုင်ရင်းသားများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုကြဟန်တူသည်။ ထိုစဉ်ကပင် တိုင်းရင်းသားတို့သည် ငွေထည်ယဉ်ကျေးမှု ရှိခဲ့သည်မဟုတ်လော။
တရုတ်တို့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် မြန်မာပြည်သည် မင်းတုန်းမင်နှင့် သီပေါမင်းတို့လက်ထက် ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်း၌ အလုပ်လုပ်ရန်တပ်မကြီးများ ပို့လွတ်သော်လည်း သတ္တုတူးဖေါ်သည့်ပညာရပ်တွင် တတ်ကျွမ်းမှုနည်းပါးသဖြင့် မြန်မာတို့သည် ဘော်တွင်သတ္တုတွင်းမှ စွန့်ခွာခဲ့ကြသည်ဟု မက္ကလာရင်၏ မှတ်တမ်း၌ ဆိုပါသည်။
တရုတ်ပြည်မင်နန်းဆက်တွင် နာမည်ကြီးလှသော နန်းတွင်းသုံးငွေထည်ပစ္စည်းများမှာ ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်းမှ ဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာဟားဘတ်ဟူးဘား၏မှတ်တမ်း၌ ဆိုပါသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့က ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်းမှ စိတ်ဝင်စားသောအရာမှာ တရုတ်တို့ငွေသတ္တုစင်ကို ကြိုချက်ထုတ်ယူပြီးနောက် အကြွင်းအကျန်အဖြစ် စွန့်ပစ်ထားခဲ့သောခဲချော်ချေး (Slag) အပုံကြီးများပင်ဖြစ်လေသည်။ ခဲချော်ချေး (Slag) တို့တွင် ၄၅%မှ ၅၀%အထိခဲပါဝင်ပြီး ၁၅%မှ ၁၆%အထိသွပ်ပါဝင်ကြပါသည်။ အင်္ဂလိပ်တို့သည် ၁၉၀၃-ခုနှစ်တွင် Mr. Acmartin ဆိုသူဗြိတိသျှလူမျိုးတစ်ဦးနှင့် Mr. ME Timber Slay ဆိုသူတို့ တွဲဖက်၍ မြန်မာပြည် သတ္တုတိုးချဲ့တူးဖေါ်ရေး အေဂျင်စီကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဂျီ၊ အီး၊ အမ်၊ စီခေါ် မဟာအရှေ့ဖျားသတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီ၊ Great Eastan Mining Co, Ltd. ကိုတည်ထောင်ကာ ထိုချော်ပုံကြီးကို တူးယူ၍ မန္တလေးတွင် တည်ထားသော သတ္တုချက်ဖိုလေးများနှင့်ခဲသတ္တုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
သို့သော် ဂျီ၊ အီး၊ အမ်၊ စီ အနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ရေးကိစ္စကိုကောင်းစွာ မလုပ်မီအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အကျိုးများစွာမခံစားရဘဲ မိမိပိုင်ပစ္စည်းများကို ၁၉၀၆-ခုနှစ်တွင် ဘားမားမိုင်းလီမိတတ် (Burmar Mines Co, Ltd) သို့ရောင်းစားလိုက်ရသည်။
အဲဒီမှာ ဟားဘတ်ဟူးဘား ရဲ့မှတ်တမ်းတော့ ကိုးကားပီး…သူလုပ်သွားတယ်လို့တော့မတွေ့ပါဂျောင်းးး